Tanzania Ichagamuchira Major East Africa Dunhu Rekushanya Expo muna Gumiguru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Tanzania Ichagamuchira Major East Africa Dunhu Rekushanya Expo muna Gumiguru
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Makurukota aya akatenderana kuumba EAC Regional Tourism Expo (EARTE) yepagore nedonzvo rekuvandudza kuoneka kwedunhu iri nekushambadza senzvimbo imwechete yekushanya.
Nyika dzekuEast Africa dzichaita chiratidziro chikuru chekushanya muna Gumiguru gore rino.
Yekutanga uye yakakosha yedunhu yekuratidzira yekuratidzira yakagadzirirwa kuitirwa muTanzania.
Chiratidziro chikuru chekushanya kwematunhu chakagadzirirwa kukwezva vatori vechikamu kubva kunhengo dzenyika dzeTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi neSouth Sudan.
Kushambadzira kushanya sechigadzirwa chezvemari, dunhu reEast Africa richaita chiratidziro chikuru chekushanya muna Gumiguru gore rino pasi pesimba rekubatanidzwa kwematunhu uye kushambadzira kwekushanya kwenzvimbo.
Chiratidziro chekutanga uye chikuru chekushanyirwa kwenharaunda chiri kuitirwa kuTanzania, kukwezva nyika nhanhatu dzedunhu reEast Africa Community (EAC) kuratidzira zvinokwezva vashanyi pasi pemuraira wekubatanidzwa kwematunhu mukushanya.
Mishumo kubva ku Nharaunda yeEast Africa mahofisi makuru kuchamhembe kweTanzania guta revashanyi reArusha rakati chiratidzo chekutanga uye chikuru chekushanya chakarongwa muna Gumiguru kukwezva vatori vechikamu vanobva kunhengo dzenyika dzeTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi neSouth Sudan.
Gurukota rinoona nezve zviwanikwa nekushanya kuTanzania Dr.Damas Ndumbaro vange vazivisa musangano wezvekushanya mudunhu panguva yemusangano chaiwo neEast African Community (EAC) Kanzuru yeMakurukota eVashanyi.